Diego Simeone Oo 300 Guul La Gaaray Kooxda Atletico Madrid.
HomeHoryaalka SpainDiego Simeone oo 300 guul la gaaray kooxda Atletico Madrid.
December 23, 2020 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Guushii ay Atletico Madrid ka gaartay kooxda Real Sociedad ayaa aheyd guushii 300aad ee Diego Simeone xidigaha Hermozo iyo Llorente ayaa Atletico ka caawiyeen ineey sii xajistaan Fooqa sare ee hogaanka La liga.
Diego Simeone ayaa ka hadlay mahadcelintiisii ​​tababaranimo ee Atletico Madrid ka dib markii uu ku guuleystay guushiisii 300aad ee kooxda laakiin ma ogola in dhacdooyinka muhiimka ahi ay saameyn ku yeeshaan diiradda isagoo qirey in madaxda sare ay ceyrin karaan daqiiqad ka hor.
Atletico ayaa soo bandhigtay ciyaar dhameystiran Talaadadii markii ay 2-0 ku garaaceen kooxda Real Sociedad Waxay aheyd markii sagaalaad oo nadiif ah 13 kulan oo ay ciyaareen horyaalka xilli ciyaareedkan halka kaliya 1995-96 ay goolal ka yar (afar) ka dhaliyeen marxaladan xilli ciyaareedka marka loo eego 2020-21 ay dhaliyeen(shan).
Guusha ayaa la micno ah in Simeone – oo xilka hayay tan iyo 2011 – uu kaliya sideed u jiro Luis Aragones ‘rikoorkiisii ​​abid ugu fiicnaa ee kooxda ee uu ku guuleysto 308 tartamada oo dhan. Simeone wuxuu qirey in la gaaro tiradaas cajiibka ah waxay ahayd sharaf. “Waxay macnaheedu tahay wax badan,” ayuu u sheegay suxufiyiinta.
Waxaan u imid kooxda fikrad ah inaan Atletico ku hogaamiyo meesha ugu sareysa kulankaan. Waxaan u heellanaa dadkeyga oo dhan, ciyaartooyda kubada cagta. Waa inaan u mahadceliyaa Miguel Angel Gil, Madaxa Atletico iyo Enrique Cerezo, madaxweynaha kooxda sida ay ii keeneen kooxda.